मुक्ति भनेको के हो? , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
म किन बाँचिरहेछु के मेरो जीवनको कुनै अर्थ छ? म मरे पछि के हुन्छ? सक्कली प्रश्नहरू जुन सबैले पहिले आफैं सोधेको हुन सक्छ। प्रश्नहरू जुन हामी तपाईंलाई यहाँ जवाफ दिन्छौं भनेर एक जवाफ: देखाउनुहोस्, हो, जीवनको एक अर्थ छ; हो, मृत्यु पछि जीवन छ। मृत्यु भन्दा सुरक्षित केही छैन। एक दिन हामीले एउटा डरलाग्दो समाचार पाउँदछौं कि एक प्रियजनको मृत्यु भएको छ। यो अचानक हामीलाई सम्झना दिलाउँछ कि हामी पनि भोलि, अर्को वर्ष वा आधा शताब्दीमा मर्नै पर्छ। युवायुवतीको पौराणिक फवाराको खोजीमा मृत्युको डरले विकिस्टोर पोन्से दे लियोनलाई डोर्याएको छ। तर रिपर खारेज गर्न सकिदैन। मृत्यु सबैलाई आउँछ।
आज धेरै वैज्ञानिक र प्राविधिक जीवन विस्तार र सुधारको लागि आशा राख्छन्। यदि वैज्ञानिकहरूले जैविक संयन्त्रहरू पत्ता लगाउन सक्षम भए जुन ढिलो हुन सक्छ वा ढल्कँदो उमेर रोक्न सक्छ! यो विश्वको इतिहासमा सब भन्दा ठूलो र सबैभन्दा उत्साहजनक स्वागत गरिएको समाचार हुनेछ।
जहाँसम्म, हाम्रो सुपर-टेक संसारमा पनि, धेरै व्यक्तिहरूले महसुस गर्छन् कि यो एक अप्रापनीय सपना हो। त्यसकारण धेरै जना मृत्यु पछि बाँच्ने आशामा टाँसिएका हुन्छन्। हुनसक्छ तपाईं आशा गर्नेहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ। यदि मानव जीवन वास्तवमै केही ठूलो उद्देश्यको अधीनमा रहेको भए के यो अचम्मको कुरा हुने थिएन र? एउटा भाग्यमा अनन्त जीवन समावेश छ? यो आशा परमेश्वरको मुक्तिको योजनामा ​​छ।
भनौं भने, परमेश्वर मानिसहरूलाई अनन्त जीवन दिन चाहानुहुन्छ। प्रेरित पावल लेख्छन्, परमेश्वर झुट बोल्नुहुन्न, अनन्त जीवनको आशाको प्रतिज्ञा गर्नुभयो ... (तीतस १: २)
उहाँ कतै लेख्नुहुन्छ कि परमेश्वर सबै व्यक्तिहरू मुक्ति पाएको र सत्यलाई जानून् भन्ने चाहनुहुन्छ (१ तिमोथी २:,, सेटबाट अनुवाद)। येशू ख्रीष्टले प्रचार गरेको मुक्तिको सुसमाचारको माध्यमबाट, परमेश्वरको चिकित्सा अनुग्रह सबै मानिसहरुमा देखा पर्‍यो (तीतस १: २)
पाप संसारमा अदनको बगैंचामा आएको थियो। आदम र हव्वाले पाप गरे र तिनीहरूका सन्तानहरूले पनि त्यसै गरे। रोमी In मा पावल सबै मानिस पापी छन् भनेर वर्णन गर्दछन्।
त्यहाँ कोही पनि निष्पक्ष छैनन् (पद १०)
ईश्वरको बारेमा सोध्ने कोही छैन (पद १०)
असल गर्ने कोही छैन (पद १०)
त्यहाँ भगवानको कुनै डर छैन (पद १ 18)
... तिनीहरू सबै पापी हुन् र उनीहरूसँग परमेश्वरसँग हुनुपर्ने महिमाको अभाव छ, पावल भन्छन् (पद १ 23) उसले पापलाई जित्न असक्षम भएकोले ईर्ष्या, हत्या, यौन अनैतिकता र हिंसालगायतका खराब कुराहरू सूचीबद्ध गर्दछ (रोमी १: २ -1 --29१)
प्रेरित पत्रुसले यी मानव कमजोरीहरू आत्मासित लड्ने शारीरिक इच्छाको रूपमा बोले (१ पत्रुस २:११); पावल ती पापी इच्छाहरूको रूपमा बोल्दछन् (रोमी १०:१:7)। उनी भन्छन् कि मानिसहरु यस संसारको प्रकृति अनुसार बाँच्दछन् र शरीर र इन्द्रियहरुको इच्छा पूरा गर्न कोसिस गर्दछन् (एफिसी २: १ 2-२२) सबै भन्दा राम्रो गर्ने र गर्ने सोचले पनि बाइबलमा न्याय भन्ने कुराको न्याय गर्दैन।
परमेश्वरको व्यवस्थाले पापलाई परिभाषित गर्दछ
पापको अर्थ के हो, परमेश्वरको इच्छाको विपरित हुनुको अर्थ ईश्वरीय व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा मात्र परिभाषित गर्न सकिन्छ। परमेश्वरको व्यवस्थाले परमेश्वरको चरित्र झल्काउँछ। यसले पापरहित मानव व्यवहारको लागि मानदण्डहरू सेट गर्दछ। ... पापको ज्याला मृत्यु, हो भनेर पावल लेख्छन् (रोमी १०:१:6)। यो युग्मनले पापलाई मृत्युदण्ड प्रदान गर्दछ जुन हाम्रो पहिलो आमाबाबु आदम र हव्वासँग शुरू भयो। पावल हामीलाई भन्छन्: ... जसरी एउटा मानिस [आदम] मार्फत संसारमा पाप आयो र पापद्वारा मृत्यु भयो, त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसमा आइपुगे किनकि उनीहरू सबैले पाप गरेका थिए। (रोमी १०:१:5)।
केवल भगवानले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ
ज्याला, पापको दण्ड, मृत्यु हो र हामी सबै यसको लागि योग्य छौं किनकि हामीले सबैले पाप गरेका छौं। हामी केहि मृत्युबाट बच्न हामी आफैले केही गर्न सक्दैनौं। हामी भगवानसँग काम गर्न सक्दैनौं। हामीसँग उसलाई प्रस्ताव गर्न सक्ने केही छैन। राम्रो कामले पनि हामीलाई हाम्रो साझा गन्तव्यबाट बचाउन सक्दैन। हामी आफैले गर्न सक्ने कुनै पनि कुराले हाम्रो आध्यात्मिक असिद्धतालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।
एउटा नाजुक अवस्था, तर अर्कोतर्फ हामीसँग निश्चित, निश्चित आशा छ। पावलले रोमीहरूलाई लेखेका थिए कि मानिसजाति तिनीहरूको इच्छा बिना परिवर्तनको अधीनमा छ, तर जसले यो पेश गर्नुभयो, तर आशाको साथ (रोमी १०:१:8)।
परमेश्वरले हामीलाई आफैंबाट बचाउनुहुनेछ। कस्तो राम्रो समाचार! पावल थप्छ: ... किनकि सृष्टि पनि अनन्तताको बन्धनबाट स्वतन्त्र हुनेछ परमेश्वरका सन्तानहरूको अद्भुत स्वतन्त्रताको लागि (पद १ 21) अब हामी परमेश्वरले उद्धारको प्रतिज्ञालाई नियालेर हेरौं।
मानिसजाति सृष्टि हुनुभन्दा अघि नै परमेश्वरको मुक्तिको योजना स्थापित भइसकेको थियो। संसारको शुरूदेखि नै, परमेश्वरको पुत्र, येशू ख्रीष्ट, चुनिएका बलिहरू थिए (प्रकाश २२:१२)। पत्रुसले घोषणा गरे कि इसाईलाई महँगो ख्रीष्टको महँगो रगतको साथ छुटकारा दिइनेछ, जुन संसार हुनु अघि नै छानिएको थियो (२ पत्रुस १: 1-1-))
पापको बलिदान प्रदान गर्ने परमेश्वरको निर्णयलाई परमेश्वरले अनन्त उद्देश्यको रूपमा बयान गर्नुभयो जुन परमेश्वरले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा गर्नुभयो (एफिसी १:२०)। आउँदै गरेको समयमा, परमेश्वर ... ख्रीष्ट येशूमा हामीतर्फको उहाँको भलाइको माध्यमबाट उहाँको अनुग्रहको विपुल धन देखाउन चाहानुहुन्छ (एफिसी १:२०)।
नासरतका येशू, अवतारमा परमेश्वर आउनु भयो र हाम्रा बीचमा बस्नुभयो (यूहन्ना १:1:२:14) उनले मानवतालाई ग्रहण गरे र हाम्रो आवश्यकता र चिन्ताहरू साझा गरे। उहाँ हामीजस्तै परीक्षित हुनुभयो तर उहाँ पापरहित रहनुभयो (हिब्रू १२: २।)। यद्यपि उहाँ सिद्ध र पापरहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हाम्रो पापहरूको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो।
हामीले सिक्यौं कि येशूले हाम्रो आध्यात्मिक नोट क्रूसमा राख्नुभयो (कलस्सी २:१:2 बाट १।)। उसले हाम्रो पापको खातालाई फर्कायो ताकि हामी बाँच्न सकौं। येशू हामीलाई बचाउनको लागि मर्नुभयो!
येशूलाई पठाउनुको ईश्वरीय अभिप्राय इसाई संसारको सबैभन्दा प्रख्यात बाइबल पदहरूमा संक्षिप्त रूपमा व्यक्त गरिएको छ: किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एक मात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमा विश्वास गर्ने सबै हराउँदैन, बरु अनन्त जीवन हुनुको लागि (यूहन्ना :3:१:16)।
येशूको कामले हामीलाई बचाउँछ
परमेश्वरले उहाँलाई संसारमा पठाउनुभयो उहाँ मार्फत संसार बचाउन (यूहन्ना १:3:२:17) हाम्रो मुक्ति येशू मार्फत मात्र सम्भव छ। ... त्यहाँ कुनै पनि अन्य मुक्ति छैन, न त स्वर्ग मुनि कुनै अर्को नाम दिइएको छ जसद्वारा हामी मुक्ति पाउनेछौं (प्रेरित १:4:२:12)।
मुक्तिको योजनामा ​​हामी धर्मी ठहरिन्छौं र परमेश्वरसँग मिलाप गर्नुपर्दछ। औचित्य पापको क्षमा मात्र होइन (जुन समावेश छ, तथापि)। परमेश्वरले हामीलाई पापबाट बचाउनुहुन्छ र पवित्र आत्माको शक्तिले हामीलाई उहाँमाथि भरोसा राख्न, उहाँको आज्ञा पालन गर्न र उहाँलाई प्रेम गर्न सक्षम तुल्याउँछ।
येशूको बलिदान भनेको परमेश्वरको अनुग्रहको अभिव्यक्ति हो जसले एक व्यक्तिको पापहरू छुटकारा दिन्छ र मृत्युदण्ड रद्द गर्दछ। पावल लेख्छन् कि एउटाको धार्मिकता सबै मानिसका लागि धर्मी ठहरिन्छ (परमेश्वरको अनुग्रहबाट) जसले जीवनतर्फ डो .्याउँछ (रोमी १०:१:5)।
येशूको बलिदान र परमेश्वरको अनुग्रहबिना हामी पापको दासत्वमा रहन्छौं। हामी सबै पापी छौं, हामी सबैलाई मृत्युदण्डको सामना गर्नुपर्छ। पापले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्दछ। यसले परमेश्वर र हाम्रो बिचमा भित्ता बनाउँछ जुन उहाँको अनुग्रहले नष्ट हुनुपर्दछ।
कसरी पाप निन्दा गरिएको छ
परमेश्वरको मुक्तिको योजना पापको निन्दाको माग गर्दछ। हामी पढ्छौं: पापी मासुको रूपमा आफ्नो छोरालाई पठाएर ... [परमेश्वरले] शरीरमा पापको निन्दा गर्नुभयो (रोमी १०:१:8)। Diese Verdammung hat mehrere Dimensionen. Am Anfang stand unsere unausweichliche Sündenstrafe, die Verurteilung zum ewigen Tod. Dieses Todesurteil konnte nur durch ein vollkommenes Sündenopfer verdammt oder aufgehoben werden. Dies bewirkte Jesu Tod.
पावलले एफिसीहरूलाई लेखेका थिए कि तिनीहरू ख्रीष्टसँगै जीवित थिए जब तिनीहरू पापमा मरेका थिए (एफिसी १:२०)। त्यसो भए एउटा मुख्य वाक्य, जसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि मुक्ति प्राप्त गर्न हामीलाई सक्षम बनाउँछ: ... तपाईं अनुग्रहले बचाउनुभएको छ ...; मुक्तिको अनुग्रहबाट मात्र आउँछ।
हामी एक पटक पापको कारण थियौं, व्यावहारिक रूपमा मरेका थियौं, यद्यपि शारीरिक, जीवित। परमेश्वरद्वारा धर्मी ठहरिएका व्यक्तिहरू अझै पनि शारीरिक मृत्युको अधीनमा छन्, तर सम्भावित रूपमा पहिले नै अनन्त छन्।
एफिसी २: in मा पावलले हामीलाई भन्छन्: किनकि अनुग्रहबाट तपाईं विश्वासद्वारा मुक्ति पाउनुभएको छ, तपाईंबाट होइन: परमेश्वरको वरदान हो ... न्यायिक हिसाबले: परमेश्वरसँग मिलाप गर्नु। पापले हामी र ईश्वरको बिचमा भिन्नता ल्याउँछ। औचित्यले यस बिरोधलाई हटाउँछ र हामीलाई परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा पुर्‍याउँछ। तब हामी पापका भय the्कर परिणामहरूबाट मुक्ति पाउँछौं। हामी बन्दी बनाएर राखिएको संसारबाट बचाईएको छ। हामी ईश्वरीय प्रकृतिमा साझा ... र संसारको हानिकारक इच्छा बाट भाग्यौं (२ पत्रुस :2:१:1)।
परमेश्वरसँग यस्तो सम्बन्ध भएको व्यक्तिहरूमध्ये पावल भन्छन्: अब हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौं, हामीसँग परमेश्वरसँग शान्तिमय सम्बन्ध छ हाम्रा प्रभु।
जीसस क्राइष्ट... (रोमी १०:१:5)।
यसकारण अब इसाई अनुग्रहको अधीनमा छ, पापको लागि स्वतन्त्र छैन, तर पवित्र आत्माले निरन्तर पश्चात्ताप गर्यो। जोन लेख्छन्: तर यदि हामी हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्छौं, उहाँ वफादार हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र हामीलाई सबै अन्यायबाट शुद्ध पार्नुहुन्छ (१ यूहन्ना :1: १))
मसीहीहरूको हैसियतमा हामीसित अब पाप गर्ने मनोवृत्ति हुनेछैन। बरु, हामी हाम्रो जीवनमा ईश्वरीय आत्माको फल उठाउनेछौं (गलाती 5: २-।)
पावल लेख्छन्: किनकि हामी उहाँका कार्यहरू हौं, येशू ख्रीष्टमा असल कामहरूका लागि सृष्टि गर्नुभयो ... (एफिसी २: १ ०) हामी असल कामका माध्यमबाट औचित्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं। मानिस धर्मी ठहरिन्छ ... ख्रीष्टमा विश्वास गरेर र व्यवस्थाका कामहरूद्वारा होइन (गलाती २:२०)।
हामी न्याय गर्दछौं ... व्यवस्थाका कामहरू बिना विश्वासद्वारा मात्र (रोमी १०:१:3)। तर यदि हामी भगवान्‌को मार्गमा गयौं भने, हामी उहाँलाई खुसी पार्ने कोसिस पनि गर्नेछौं। हामी हाम्रा कामहरूद्वारा मुक्ति पाउँदैनौं, तर परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो ताकि हामी असल कार्यहरू गर्न सक्दछौं।
हामी परमेश्वरको अनुग्रह कमाउन सक्दैनौं। हामीलाई दिनुहुन्छ। मुक्ति भनेको त्यस्तो कुरा होइन जुन हामीले पश्चात्ताप वा धार्मिक कार्यहरू मार्फत काम गर्न सक्दछौं। ईश्वरको अनुग्रह र अनुग्रह सधैं अपरिवर्तित रहन्छ।
पावल लेख्छन् कि धर्मीकरण भनेको परमेश्वरको दया र मानिसहरूलाई प्रेमबाट आउँछ (तीतस १: २) यो हामीले गरेका न्यायका कामका लागि होइन, तर उहाँको कृपाको लागि हो (पद १ 5)
एक पटक जब भगवानले हामीलाई बोलाउनुभयो र हामी विश्वास र विश्वासका साथ कललाई अनुसरण गर्‍यौं, परमेश्वरले हामीलाई उसको सन्तान बनाउनुहुन्छ। यहाँ पावलले परमेश्वरको अनुग्रहको कार्यलाई बयान गर्न उदाहरणको रूपमा दत्तक प्रयोग गरे: हामी बच्चाको जस्तो मनोभाव पाउँछौं [भीड-ट्रान्सपोर्ट। (रोमी १०:१:8)। यस तरिकामा हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हुन्छौं र यसरी उत्तराधिकारीहरू हुन्छौं, अर्थात् परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रीष्टका संयुक्त उत्तराधिकारी (पद 16-।)
अनुग्रह प्राप्त गर्नु अघि, हामी संसारका शक्तिको बन्धनमा थियौं (गलाती २:२०)। येशू हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ ताकि हामी बाल्यावस्था प्राप्त गर्न सकौं (पद १ 5) पावल भन्छन्: किनकि अब तपाईं केटाकेटीहरू हुनुहुन्छ ... अब तपाईं दास होइन, तर केटा; तर यदि बच्चा, त्यसो भए परमेश्वर मार्फत पैतृक सम्पत्तिको रूपमा (पद 6-।) त्यो अचम्मको वाचा हो। हामी भगवानले अपनाएका बच्चाहरू बन्न सक्छौं र अनन्त जीवनको हकदार हुन सक्छौं। रोमी 8:१:15 र गलाती:: in मा बाल्यकालको लागि ग्रीक शब्द हुओथिसिया हो। पावलले यो शब्द विशेष तरिकामा प्रयोग गरे जुन रोमी कानूनको अभ्यास झल्किन्छ। रोमन संसारमा जहाँ उनका पाठकहरू बसोबास गर्थे, बच्चालाई धर्मपुत्र बनाउने विशेष अर्थ थियो जुन यो रोमको अधीनमा रहेका मानिसहरुमा सधैं थिएन।
रोमन र ग्रीक संसारमा, माथिल्लो सामाजिक वर्गमा गोद लिने एउटा सामान्य प्रचलन थियो। अपनाएको बच्चा परिवारबाट व्यक्तिगत रूपमा चयन गरिएको थियो। कानूनी अधिकार बच्चामा हस्तान्तरण गरियो। यो एक उत्तराधिकारीको रूपमा प्रयोग भयो।
यदि तपाईं एक रोमन परिवार द्वारा अपनाएको थियो, नयाँ परिवार सम्बन्ध कानूनी रूपमा बाध्यकारी थियो। अंगिकार ले मात्र दायित्वहरू ल्याएन, तर परिवार अधिकार पनि हस्तान्तरण गर्‍यो। बच्चाको गोद लिनुको साटो यति अन्तिम चीज हुनुको सट्टा, नयाँ परिवारमा स b्क्रमण यति बाध्यकारी थियो कि अपनाएको बच्चालाई जैविक बच्चाको रूपमा व्यवहार गरियो। किनकि परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ, रोमी इसाईहरूले पक्कै पनि बुझे कि पावल उनीहरूलाई यहाँ बताउन चाहन्छन्: परमेश्वरको घरानामा तपाईको स्थान सँधै रहन्छ।
परमेश्वर हामीलाई विशेष र व्यक्तिगत तवरले अपनाउने छनौट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरसँगको यो नयाँ सम्बन्ध जुन हामीले यसबाट प्राप्त गर्छौं, त्यो येशूले अर्को प्रतीकको साथ व्यक्त गर्नुभयो: निकोदेमससँग कुराकानी गर्दा ऊ भन्छ कि हामी नयाँ गरी जन्मनुपर्दछ। (यूहन्ना १:3:२:3)
यसरी हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हुन्छौं। जोहान्सले हामीलाई भन्छ: हेर, हामीलाई पिताको सन्तान भनिनु पर्छ र हामी पनि हौं! यसैले संसारले हामीलाई चिन्दैन; किनभने उनी उहाँलाई चिन्दिन। प्रियहरू, हामी पहिले नै परमेश्वरका सन्तानहरू हौं। तर हामी के हुनेछौं भनेर अझसम्म प्रकट गरिएको छैन। तर हामीलाई थाहा छ कि यदि यो स्पष्ट भयो भने हामी उहाँजस्तै हुनेछौं; किनकि हामी उहाँ जस्तै हुनुहुन्छौं (१ यूहन्ना:: १-२)
हामी पहिले नै परमेश्वरका सन्तानहरू हौं, तर हामीले अझै महिमा पाएका छैनौं। यदि हामी अनन्त जीवन प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने हाम्रो वर्तमान शरीर परिवर्तन गर्नुपर्दछ। शारीरिक, सडिएको शरीर अनन्त र अविनाशी शरीरको द्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ।
१ कोरिन्थी १ 1 मा पावल लेख्छन्: तर कसैले यस्तो प्रश्न गर्न सक्छ: मरेकाहरूको पुनरुत्थान कसरी हुनेछ र उनीहरू कस्तो किसिमको शरीरको साथ आउनेछन्? (पद १ 35) हाम्रो वर्तमान शरीर भौतिक छ, माटो छ (पद 42२ देखि 49))। मासु र रगतले परमेश्वरको राज्यको अधिकार गर्न सक्दैन, जुन आत्मिक र अनन्त छ (पद १ 50) किनकि यस क्षयले अव्यावहारिकतालाई आकर्षित गर्नुपर्दछ, र यो नश्वरले अमरत्वलाई आकर्षित गर्दछ (पद १ 53)
यो अन्तिम परिवर्तन पुनरुत्थान नभएसम्म हुन्छ, जब येशू फर्कनुहुन्छ। पावलले वर्णन गरे: हामी उद्धारक, प्रभु येशू ख्रीष्टको पर्खाइमा छौं, जसले हाम्रो व्यर्थ शरीरलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ, कि उहाँ उहाँको महिमामय शरीर बन्नुहुनेछ। (फिलिप्पी :3:२० बाट २१) परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने र पालन गर्ने ईसाईको स्वर्गमा नागरिक अधिकारहरू छन्। तर जब ख्रीष्ट फेरि आउनुभयो तब मात्र महसुस भयो
यो अन्तिम हो; त्यसबेला मात्र इसाईले अमरत्व र परमेश्वरको राज्यको पूर्णता प्राप्त गर्दछ।
हामी कत्ति कृतज्ञ हुन सक्छौं कि परमेश्वरले हामीलाई ज्योतिमा संतहरूको उत्तराधिकारी हुन योग्य बनाउनुभएको छ (कलस्सी २:)) परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारको शक्तिबाट बचाउनुभयो र आफ्नो प्यारो छोराको राज्यमा राख्नुभयो (पद १ 13)
एउटा नयाँ जीव
परमेश्वरको राज्यमा स्वीकार्य भएकाहरूले जबसम्म परमेश्वरमा भरोसा राख्छन् र उहाँको आज्ञा पालन गर्दछन् तबसम्म ज्योतिमा रहेका संतहरूको सम्पदाको मजा लिन सक्छन्। किनकि हामी परमेश्वरको अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौं, उहाँको दृष्टिकोणमा मुक्ति पूर्ण र पूर्ण छ।
पावल वर्णन गर्दछन्: यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो; पुरानो बितेको छ, हेर्नुहोस्, नयाँ भएको छ (१ कोरिन्थी १:2:१२)। भगवानले हाम्रो छाप र हाम्रो हृदय मा जस्तै
प्रतिज्ञा दिए आत्मा (१ कोरिन्थी १:2:१२)। परिवर्तित, समर्पित व्यक्ति पहिले नै नयाँ जीव हो।
जो अनुग्रहको अधीनमा छ ऊ पहिले नै परमेश्वरको बच्चा हो। उहाँको नाममा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले परमेश्वरको सन्तान हुने शक्ति दिनुहुन्छ (यूहन्ना १:1:२:12)
पावलले परमेश्वरको बरदान र कलिंगहरू अपरिवर्तनीय भनेर वर्णन गर्दछन् (रोमी ११: २,, भीड अनुवाद)। त्यसकारण उनले यो पनि भन्न सक्थे: ... म विश्वस्त छु कि जसले तपाईंमा राम्रो काम शुरू गर्नुभयो उसले येशू ख्रीष्टको दिनसम्म यो काम पूरा गर्नेछ। (फिलिप्पी :1:१:6)
परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएका मानिस कहिलेकाहीं ठेस लागोस्: परमेश्वर उहाँप्रति विश्वासी रहनुहुन्छ। उडन्ता छोराको कथा (लूका १ 15) देखाउँदछ कि परमेश्वरको छनौट गरिएको र बोलाइएका अझै पनि आफ्ना बच्चाहरू मिस मिसिप्सको घटनामा पनी बाँच्दछन्। ईश्वर आशा गर्दछ कि अपहरणकर्ताहरू भित्र पसे र उहाँमा फर्कून्। ऊ मान्छेहरूको न्याय गर्न चाहँदैन, ऊ उनीहरूलाई बचाउन चाहन्छ।
बाइबलमा उडन्ता छोरा साँच्चै आत्म-सचेत थियो। उसले भन्यो: मेरो बुबा कति जना मजदुरहरूसँग हुनुहुन्छ जोसँग प्रशस्त रोटी छ र म यहाँ भोकले बिगार्छु! (लूका २:15::17।) कुरा स्पष्ट छ। जब उडन्ता छोराले उसको व्यवहारको मूर्खता बुझ्यो, तब उनी पछुताए र घर फर्के। उसको बुबाले उसलाई माफ गरे। जस्तो येशू भन्नुहुन्छ: जब ऊ अझै टाढा थियो, उसको बुबाले उनलाई देख्यो र ऊ विलाप गर्दैछ। ऊ भाग्यो र आफ्नो घाँटी वरिपरि लियो र उसलाई चुम्बन गर्‍यो (लूका २:15::20।) कथाले आफ्ना बच्चाहरूप्रति परमेश्वरको वफादारी देखाउँदछ।
छोराले नम्रता र विश्वास देखायो, उसले पश्चाताप गर्यो। उसले भन्यो, हे पिता, मैले परमेश्वर र तपाईंको अघि पनि पाप गरेको छु। म अब तपाईंको छोरो भनिन लायकको छैन (लूका २:15::21।)
तर बुबा यसबारे सुन्न चाहनुहुन्न र फर्कने व्यक्तिको लागि भोजको आयोजना गर्नुभयो। उसले भन्यो मेरो छोरो मरेको थियो। तर अहिले ऊ फेरि जीवित भएको छ। ऊ हराएको थियो र भेटियो (पद १ 32)
यदि परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुभयो भने, हामी सँधै उसका सन्तान हुनेछौं। पुनरुत्थानमा उहाँसँग हामी पूर्ण रूपमा एकता नभएसम्म उसले हामीसँग काम गरिरहनेछ।
उहाँको अनुग्रहले, परमेश्वरले हामीलाई सबैभन्दा महँगो र सबैभन्दा ठूलो प्रतिज्ञाहरू दिनुहुन्छ (२ पत्रुस :2:१:1)। तिनीहरू मार्फत हामी ईश्वरीय प्रकृतिमा एक शेयर प्राप्त ... परमेश्वरको अनुग्रहको रहस्य भित्र छ
येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा जीवित आशा (२ पत्रुस :1:१:1)। यो आशा हाम्रो लागि स्वर्गमा राखिएको एक अविनाशी सम्पदा हो (पद १ 4) वर्तमानमा हामी अझै पनि विश्वासको माध्यमबाट परमेश्वरको शक्तिबाट ... मुक्तिमा छन् जुन अन्तिम क्षणमा प्रकट हुन तयार छ (पद १ 5)
परमेश्वरको उद्धारको योजना अन्तत: येशूको दोस्रो आगमन र मरेकाहरूको बौरिउठाइसँग साकार हुनेछ। तब प्राणिसहित अमरको लागि माथि उल्लिखित परिवर्तन हुन्छ। प्रेरित यूहन्ना भन्छन्: तर हामीलाई थाहा छ: यदि यो स्पष्ट भयो भने हामी उहाँजस्तै हुनेछौं; किनकि हामी उहाँ जस्तै हुनुहुन्छौं (१ यूहन्ना :1: १))
ख्रीष्टको बौरिउठाइले ग्यारेन्टी दिन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई मृत्युबाट पुनरुत्थानको प्रतिज्ञा प्रदान गर्नुहुनेछ। हेर, म तिमीलाई एउटा रहस्य बताउँछु, पावल लेख्छन्। हामी सबै निदाउँदैनौं, तर हामी सबै परिवर्तन हुनेछौं। र अचानक, एकैचोटि ... मरेकाहरू अनिवार्य रूपमा फेरि जीवित हुनेछन्, र हामी परिवर्तन हुनेछौं (१ कोरिन्थी १: २१-२1) यो अन्तिम तुरहीको आवाजमा हुन्छ, येशू फर्कनु भन्दा पहिले (प्रकाश २२:१२)।
येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उहाँमा विश्वास गर्ने सबैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन्; म अन्तिम दिनमा उसलाई उठाउनेछु, उसले आश्वासन दिन्छ (यूहन्ना १:6:२:40)
प्रेरित पावल वर्णन गर्छन्: किनकि यदि येशू मरे र फेरि बौरेर उठ्नुभयो भनेर विश्वास गर्छौं भने, येशूमार्फत उहाँसँगै सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले अगुवाइ गर्नुहुनेछ (१ थिस्सलोनिकी :1:१:4)। फेरि ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको समय हो। पावल अझै भन्छन्: जब ऊ आफैं प्रभु हो, जब आज्ञा सुनेपछि ... स्वर्गबाट ​​ओर्लिन्छ ... र ख्रीष्टमा मर्नुभएका मरेकाहरूको पुनरुत्थान हुन्छ। (पद १ 16) तब जो ख्रीष्टको पुन: आगमनमा जीवित छन् उनीहरूलाई प्रभुको तर्फ बादलमा लगिनेछ; र हामी सधैं प्रभुको साथमा हुनेछौं (पद १ 17)
पावलले इसाईहरुलाई सोध्छन्: एक अर्कालाई यी शब्दहरुबाट सान्त्वना दिनुहोस् (पद १ 18) र राम्रो कारण संग। पुनरुत्थान त्यो समय हो जब अनुग्रहको अधीनमा रहेका मानिसहरूले अमरत्व प्राप्त गर्नेछन्।
इनाम येशू संग आउँछ
पावलका शव्दहरू पहिले नै उद्धृत गरिएको छ: किनकि परमेश्वरको निको पार्ने अनुग्रह सबै मानिसमा देखा पर्‍यो (तीतस १: २) यो मुक्तिको खुशीको आशा हो जुन महान परमेश्वर र हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमा देखा पर्दा मुक्त हुन्छ (पद १ 13)
पुनरुत्थान भविष्यमा अझै छ। हामी पावलको जस्तै आशा गरिरहेका छौं। आफ्नो जीवनको अन्ततिर उनले भने: ... मेरो बितेको समय आइसकेको छ (१ तिमोथी:: १) ऊ जान्दछ कि ऊ परमेश्वरप्रति विश्वासी छ। मैले राम्रो लडाई लडे, मैले रन पूरा गरें, मैले विश्वास गरे ... (पद १ 7) उनी आफ्नो इनामको प्रतीक्षामा थिए: ... अबदेखि न्यायको मुकुट मेरो लागि तयार छ, जो प्रभु, धर्मी न्यायकर्ताले मलाई त्यो दिन दिनुहुनेछ, तर केवल मेरो लागि मात्र होइन, तर सबैलाई पनि जसले आफ्नो उपस्थिति मन पराउनुहुन्छ। (पद १ 8)
त्यस समयमा, पावलले भन्छन्, येशू हाम्रो व्यर्थ शरीरलाई रूपान्तरण गर्नुहुनेछ ... कि ऊ उसको महिमामय शरीर हुनेछ (फिलिप्पी :3:१:21) परमेश्वरबाटको एउटा परिवर्तन, जसले ख्रीष्टलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो र उहाँ नै तपाईंको आत्माद्वारा शरीरमा जिउँनुहुन्छ जुन तपाईंमा बास गर्दछ। (रोमी १०:१:8)।
हाम्रो जीवनको अर्थ
यदि हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौं भने, हामी हाम्रो जीवन सम्पूर्ण रूपमा येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित गर्नेछौं। हाम्रो अडान पावलको हुनुपर्छ, जसले भने कि उनले ख्रीष्टलाई जित्न सकून् भनेर उनले आफ्नो विगतको जीवनलाई फोहर तुल्याए ... म उसलाई र उनको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न चाहन्छु। (फिलिप्पी 3:,, १०)
पावललाई थाहा थियो कि उसले यो लक्ष्य हासिल गरेको छैन। म पछाडि के कुरा बिर्सन्छु र त्यहाँ जे छ त्यसको लागि पुग्छु र पूर्व-निर्धारित लक्ष्यको पीछा गर्दछु, ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय बोलावटको पुरस्कार (पद 13-।)
यो विजय पुरस्कार अनन्त जीवन हो। जसले परमेश्वरलाई आफ्नो पिताको रूपमा स्वीकार्छ र उहाँलाई प्रेम गर्छ, उसमाथि भरोसा गर्दछ र आफ्नो बाटो लाग्छ, परमेश्वरको महिमामा सदासर्वदा बाँच्नेछ (१ पत्रुस:: १ ०) प्रकाश २१: 21--6 मा, परमेश्वर हाम्रो भाग्य के हो बताउनुहुन्छ: म तिर्खालाई जीवित पानीको स्रोतबाट सित्तैंमा दिनेछु। जसले overcomes सबै अधिकार पाउनेछन् अनि म उसको परमेश्वर हुनेछु र त्यो मेरो छोरा हुनेछ।
विश्वव्यापी चर्च अफ भगवानको ब्रोशर १ 1993।